PSG Oo Wali Ka Cadhaysan Qaabkii Ay Barcelona Ugu Garaacday Saxeexa Frankie De Jong & Qorshe Cusub Oo Ay Ku Aarsanayso Oo La Ogaaday | Laacib.net
PSG Oo Wali Ka Cadhaysan Qaabkii Ay Barcelona Ugu Garaacday Saxeexa Frankie De Jong & Qorshe Cusub Oo Ay Ku Aarsanayso Oo La Ogaaday
Kooxda Paris Saint-Germain iyo madaxdeeda suuqa kala iibsiga ayaa lagu soo warramayaa inay yihiin kuwo aan wali ka seexan qaabkii ay kooxda Barcelona ugaga guuleysatay saxeexa da’yarka Frankie De Jong iyaga oo haatan qorshe cusub oo aarsasho ah soo wada.
Xiddiga ay Paris doonayso inay markeeda ka xoogto Barca ayaa ah Philippe Coutinho kaas oo hoos u dhac weyn ku muujinaya kooxda ree Spain isla markaana bilihii ugu dambeeyay lala xidhiidhinayay inuu kooxda ka baxo.
Mundo Deportivo ayaa sheegaya in PSG ay isku diyaarinayso sidii ay Coutinho kaga soo qaadan lahayd Barcelona walow uusan wali wixii kooxda loo keenay kasoo bixin maadaama oo uu January 2018 kaga soo biiray dhinaca Liverpool.
Coutinho ayaa bilihii ugu horreeyay ee waayihiisa Blaugrana ahaa mid qaab wacan soo bandhigaya balse xilli ciyaareedkan ayuu si weyn u liitaa isaga oo kaliya 15 kulan ugu soo bilawday kooxdiisa tartamada oo dhan.
Ma aha markii ugu horreysay ee ay Paris Saint-Germain isku daydo inay Coutinho geyso caasimada France balse waxa ay sidan oo kale sameeyeen wakhtigiisii Liverpool ee uu kusoo biirayay Barca iyaga oo haatan xiisahooda dib usoo nooleeyay.
Coutinho ayaa keydka la dhigay kulamadii ugu dambeeyay ee El-Classico taas oo la micno ah inuu shantii ciyaarood ee ugu dambeeyay kaliya hal kulan kaga soo bilawday.
Si kastaba ha ahaatee, Haddiiba uu Coutinho ku biiro dhinaca PSG ayuu kooxdaas kula midoobi doonaa xiddigo badan oo ree Brazil ah haba ugu horreeyo Neymar oo ay saaxiib dhaw ku yihiin xulka qaranka e.